Fonosana ranomandry miverina, fonosana amin'ny lohalika miaraka amina gilasy, ba kiraro fitsaboana mangatsiaka - Huanyi
Naorina tamin'ny 2012
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. dia orinasa mpamokatra teknolojia vaovao. Ny orinasa dia nanolo-tena tamin'ny fampandrosoana ny vokatra ranomandry gel ho an'ny hatsaran-tarehy manokana / salama ara-pahasalamana / ara-panatanjahantena / fanatanjahan-tena / fikarakarana isanandro isan-trano mampitony fitsaboana mafana sy mangatsiaka avy amin'ny 2012. Manome fialan-tsasatra izahay, fitsaboana ara-batana ary fanampiana voalohany amin'ny fiainana, voamarina ny vokatra miaraka amin'ny SGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, orinasa misy fanamarihana BSCI, manana traikefa niaraha-miasa tamin'i LIDL, ALDI, Wal-mart ary Disney.
Jiangsu Huanyi Industrial manokana amin'ny sehatry ny gilasy mafana sy mangatsiaka mandritra ny taona maro, manana traikefa betsaka izahay hampanjariana ny hevitrao ho tena izy, hanampy amin'ny famoronana ny vokatrao miaraka amin'ny fomba fonosana mety, ny famokarana rehetra dia fitiliana tsindry 100% sy lalana 100% rafitra famokarana. Ny mpivarotra anay rehetra dia ny injeniera matihanina, afaka miresaka amin'izy ireo ianao momba ny hevitra rehetra na aorian'ny serivisy fivarotana, olona iray no mahalala betsaka indrindra, noho izany dia minamana aminay, ankafizo ny serivisinay manomboka izao.
kidoro famafana alika
Fampidirana L w Mafy ny lanja M 40cm 30cn 1.0cm 700g L 50cm 40cm 1.0cm 1100g LL 60cm 50cm 1.0cm 1800g XL 90cm 50cm 1.0cm 2000g Fampidinana ny teoreman'ny mari-pana momba ny matotra mangatsiaka. Ny polymer gel mangatsiatsiaka dia mitovy amin'ny polymer gel amin'ny paty mangatsiaka ho an'ny zazakely. Ny polymer gel miaraka amin'ny atin'ny rano avo lenta dia mifoka ny hafanana avy amin'ny vatan'olombelona mankany amin'ny tsihy ary miankina amin'ny fitantanana avo sy ny famafazana polimeran'ny gel mba hanafanana mba hamoronana tsara fifanakalozana hafanana sy transferr ...
Fampidirana PORTABLE & CONVENIENT - Ity tànana mangatsiaka divay ity dia maivana, mora vidy ary mora. Ento fotsiny any amin'ny fitsangatsanganana, amoron-drano, fitsangantsanganana, na hetsika hafa hankafizanao sy fialan-tsasatra amin'ny zava-pisotro mangatsiaka na dia tsy misy siny gilasy aza. Mora ampiasaina- Atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny 2 eo ho eo ny tavoahangy tavoahangy champagne, ary apetaho amin'ny tanany ilay izy mba hanafosafoana zava-pisotro haingana ary hitazomana mangatsiaka tanteraka mandritra ny ora maro. Lavorary ampiasaina amin'ny divay, labiera, Champagne, sns .. haben'ny vokatra: 6.1 x 9.25 Inch anarana: Kitapo mangatsiaka divay, ...
Fampidirana Kompresa mafana sy mangatsiaka, azo ampiasaina indray, tsy misy fivoahana, tsy misy poizina habe: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm lanja: 120g, 130g, 160g, 180g Fampiharana ampiasaina amin'ny fitsaboana mafana sy mangatsiaka manampy amin'ny fanamaivanana ny masony mivonto, maso manjavozavo, tsy mahazo aina sinus, migraines, manome fanamaivanana tsy misy fanafody. Azo ampiasaina ho toy ny sarontava maso manakana ny hazavana amin'ny hafanan'ny efitrano. Miseho toy ny saron-tava izy io, ary azo ampiasaina ho toy ny sarontava maso mangatsiatsiaka, fa aza ferana ny eritreritrao. Ity vokatra ity dia tena ilaina amin'ny famonoana mafana na comp ...
Fampidirana THERAPY mafana sy mangatsiaka - Ny fonosan'ny gel ireto dia mifandimby eo amin'ny famohana mafana sy mangatsiatsiaka, haingana be izy ireo ary mora ampiasaina. Apetraho anaty rano mafana na anaty vata fampangatsiahana ny fonosana ranomandry, afaka miova mora foana eo anelanelan'ny maripana izy ireo ary hitazona hafanana na hatsiaka mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny fonosana mavokely malefaka. Ny fitsaboana mangatsiaka dia manampy amin'ny fihenan'ny rà mandriaka, manamaivana ny rà sy ny fivontosana. Ny fitsaboana hafanana / hafanana dia manampy amin'ny fampivoarana ny rà mandriaka ary manapaka ny fanasitranana, sitrana haingana amin'ny inju ...
Fampidirana FAHAMARINAN'NY KITSY SOOTHING: Mikendry ny lohalaharana sy ny lohalika miaraka amin'ny famatrarana azo ovaina sy ny fitsaboana mafana na ny hatsiaka, ny fihenan'ny lohalika mangatsiaka dia mampihena ny fivontosana, ny fanaintainana ary ny fivontosana noho ny havizanana, ratra na fandidiana. Ny fehin-kibo malefaka koa dia manome fanamaivanana ahazoana aina ho an'ny sprains sy ny aretina, ACL, aretin-tratra, ratra amin'ny fanatanjahan-tena, fandidiana sy maro hafa. THERAPY mafana na mangatsiaka: misy fonosana gel azo esorina amin'ny fitsaboana mafana na mangatsiaka. Ny fonosana tsirairay dia mora miposaka ao anaty ...
Fampidirana Ny hatsiaka dia afaka mampihena ny fikorianan'ny rà, ny fitsaboana mangatsiaka mampihena ny fivezivezena, mampihena ny fivontosana, ny spasm ary ny fanaintainana. Araho ny rafitra RICE aorian'ny ratra: fitsaharana: miala sasatra ary aza mampiasa ny faritra naratra. Ranomandry: ranomandry ilay faritra naratra faran'izay haingana, izany dia manampy amin'ny fampihenana ny fivontosana, ny rà ary ny mangana avy hatrany. Mametaka: Fonosy amin'ny bandy, matetika mitazona bandy elastika amin'ny kitapo fanampiana voalohany. Asandrato: tazomy ny ratra ambonin'ny fonao mba hihena ny fivontosana. Maninona no mifidy antsika? 1 ...
Maninona isika no misafidy fonosana gilasy hanamaivanana ny fanaintainana? Na manana fanaintainana miverina amin'ny bisikileta ianao, na marary mamontsina amin'ny fandidiana, ampiasao fotsiny ity fonosana ranomandry ity ho an'ny fanaintainan'ny hatoka sy ny soroka. Anaran'ny vokatra: Gel Pad Ice Pack ho an'ny vozon'ny habe: 22 * ​​7.5 INCHES lanja: 800G Logo namboarina sy fonosana taratasy: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI Ity fonosana gel ity dia miovaova foana aorian'ny fivaingana, hahafahanao mametraka azy ireo manodidina anao lohalika, soroka ary hatoka. Rehefa afaka adiny roa tao anaty vata fampangatsiahana, ny vongan-dranomandry noho ny ratra g ...
Fampidirana fitaovana: lamba vita amin'ny satin vita amin'ny firakotra PVC habe: 47cm ny savaivony, 600g Loko: mavokely mahazatra, loko azo amboarina raha toa ka mihoatra ny 2000pcs ny fampiasana: Rehefa vita ny shampooing dia apetaho miaraka tsara ny crème mofomamy, manaova satroka fandroana azo ampiasaina ary arofàna ny fanaovan-tsakafo amin'ny hafanana somary hafanana ao anaty microwave mandritra ny 2-3 minitra. Rehefa manodidina ny 35-45 degre ny mari-pana dia anaovy azy mandritra ny 15 minitra. Mety amin'ny perm, fikolokoloana aorian'ny loko ary ny fikojakojana ny kalitaon'ny volo isan'andro. Maninona no mifidy antsika? ...
Ny fahatakarana, ny fangatahana dia tongasoa hiantso amin'ny fotoana rehetra